कांग्रेसभित्र आत्मघाती गोल होल्नेलाई के कारवाही हुन्छ ? « Ramechhap News
कांग्रेसभित्र आत्मघाती गोल होल्नेलाई के कारवाही हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । कांग्रेसको त्याग र वलिदानबाट नै अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको घामजतिकै छर्लङ्ग छ । महामानव विपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुर्वणशम्शेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, भिमबहादुर तामाङ जस्ता हस्तीहरुले मलजल गरेर हुर्काएको पार्टी हो कांग्रेस । विगतमा पार्टीले लिएको नीति र विधि कुल्चिदै अहिलेको नेतृत्व बेलगामको घोडाजस्तै भएको छ । पार्टीको मूलभुत सिद्धान्तलाई लत्याएर पार्टीमा वेथिति भित्र्याउन तछाडमछाड गरिरहेका छन् । नेतृत्वको बालपनको कारण आज कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु कांग्रेस भनेर चिनाउन हिच्चकिचाउने परिस्थितिको सृजना भएको छ ।
प्रभु नारायण खड्का
कांग्रेसका कार्यकर्ता पूर्खादेखि नै कांग्रेस भएकाले अन्य पार्टीमा जाने कल्पना पनि गर्दैनन । तर अन्य पार्टीबाट आएको मान्छे रातारात माथिल्लो तहमा पुग्न सफल हुन्छ । आखिर किन ? कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त के हो ? आम कार्यकर्ता अलमलमा परेका छन् । आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकता आज निराशाको भारी बोक्न बाँध्य भएका छन् । किनकी नेतृत्व वर्गले देखाएको लाचारीको कारण मुख देखाएर हिडन् समेत गाह्रो पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
पार्टीभित्र को सिनियर को जुनियर केही मतलब छैन् । नेतृत्वको वरिपरी घुम्ने चाकडी गर्नेहरुले अवसर र पद पाउछन् । इमान्दार कार्यकर्ताहरु सधै पछाडि हुन्छन् । नेतृत्वले पार्टीभित्र पार्टीलाई योगदान गर्ने कार्यकर्ता भन्दा भन्दा पनि पैसा भएको व्यक्ति छान्दाको परिणाम समाजमा निकै नराम्रो परेको छ । पार्टीमा सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि पैसाको राजनीति पार्टीभित्र नराम्रोसँग झाङगिएको छ । पार्टीमा विधि विपरीत पैसाको आधारमा जुनियरलाई सिनियर बनाउदा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि भुसको आगोजस्तै सलकिदै आएको छ । पार्टीको लागि योगदान दिने सक्षम व्यक्तिलाई कांग्रेसभित्र पैसा र पावरको आधारमा उसको अस्थित्व नै समाप्त पार्ने खेल हुँदै आएको छ । आखिर किन ?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा पार्टीभित्र ठूलो अन्तघात देखियो । कति पुष्टि हुने गरेर देखियो । कति भित्रभित्रै विपक्षसँग मिलेर देखियो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अन्तरघातको रुप राम्रैसँग प्रकट भयो । विपक्षी त लाग्ने भए । तर त्यो भन्दा पनि बढी आफ्नै पार्टीभित्रबाट आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन रातदिन नभनी लागे । कांग्रेसभित्र के विधि र नीतिको राजनीतिक समाप्त भएको हो ? के नैतिकता र इमान्दारीता खडेरी परेकै हो ? निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर लाग्नुको सट्टा आफूले टिकट नपाउने वित्तिकै हराउन लाग्ने जमात कांग्रेसभित्र निकै ठूलो देखियो ।
सुनापति गाउँपालिका–५ खनियापानीमा कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य भएर कांग्रेसलाई भोट नहाल्नेमाथि के कारवाही होला ? नेतृत्व किन लाचारी बनिरहेको छ ? जबसम्म नेतृत्व लाचारी हुन्छ तबजसम्म यस्ता पार्टी सिध्याउने खेल जारी रहन्छ । जित्दा पार्टीले नै जित्ने हो । हार्दा पार्टी नै हार्ने हो । जानजान हार्ने खेल खेल्ने आत्मघातीमाथि रेफ्रिको भूमिकामा रहेका पार्टीको नेतृत्व के हेरेर बसिरहेको छ ? जानाजान गल्ती गर्ने खेलको नियम विपरीत आत्मघाती गोल हाल्नेलाई कारवाही गर्ने आँट पार्टी नेतृत्वले किन गर्दैन ? के काग्रेसभित्र जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट छ ? के पार्टी बेलगामको घोडा भएकै हो त ?
पार्टी नीति विपरीत काम गनेहरुलाई अन्य पार्टीमा ठाउँको ठाउँ कारवाही गरिन्छ । तर कांग्रेसभित्र पार्टी सिध्याउन लाग्ने भाइरसहरुमाथि किन कारवाही हुँदैन ? पार्टीले अनुशासन समिति भनेर नै खडा गरेको छ । के त्यो सोझासिधा कार्यकर्तालाई तर्साउन मात्र बनाइएको हो ? पार्टीभित्र गुटभित्र उपगुट झाङगिदा पनि के पार्टी नेतृत्वले टुलुटुल हेरेर बस्न मिल्छ ? सुनापति गाउँपालिका–५ खनियापानीमा त उदाहरण मात्र हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस किन दोस्रो स्थानमा सीमित हुन पुग्यो । के अब त्यसको समिक्षा गर्नु पर्दैन ? सुनापति–५ खनियापानीमा भएको अन्तरघातको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गरियोस । पार्टीभित्र यस्ता सदस्य रहदासम्म पार्टीले न विजयी हासिल गर्न सकिदैन । न कार्यकताहरुको मनोबल उच्च हुन्छ । पार्टी भनेको सबैको साझा हो । आस्था हो । पार्टीलाई सिध्याउन मरिहत्ते गरेर लाग्नेहरुलाई एक मिनेट पनि पार्टीमा बस्ने अधिकार छैन् । व्यक्तिवादले भन्दा पनि पार्टी साझा उदेश्य र नीतिले चल्नु पर्छ । बोरामा कुहिएको आलु निकालेर फाल्नु पर्छ । किनकी समयमा नै कुहिएको आलु नफाल्ने हो भने सिंगो बोराको आलु नै कुहिन्छ । नेतृत्वलाई चेतना भया ।